ओरालोको सडक निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
ओरालोको सडक निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापन
२०७१ चैत्र ६, शुक्रबार ०१:४३ गते
यो लेख नारायणगढ क्षेत्रका नयाँ–पुराना सडकको अवस्था, त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ । पूर्वाधारहरु हामीसँग नभएका होइनन्, छन् र आवश्यक परेमा बनाउन पनि तयार छौँ, तर त्यस्ता पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन र संरक्षणमा हामी चुकेका छौँ । अहिले नारायणगढ क्षेत्रमा केही सडकखण्ड निर्माणको अवस्थामा छन्, केही दुरवस्थामा पुगेका छन् भने केही ठीकठाक नै छन् । बजारको बीचोबीच भएर जाने मूल सडक लगभग ठीकठाक छ । एकपटक काठमाडौँबाट मेरो साथी आयो, ऊसँग प्रारम्भिक शिक्षा नै बेलायतमा लिएकी एक जना अर्की साथी पनि थिइन् । पुल्चोक– सहिदचोक क्षेत्रको सडकको अवस्था देखेर उनले दंग हुँदै भनेकी थिइन्– ‘वा ! यत्तिको फराकिलो सडक त विदेशमा पनि कमै देख्न पाइन्छ ।’
तर, त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा हामी नराम्ररी चुकेका छौँ । फराकिलो फुटपाथ पसल राखेर भीडभाडमा परिणत भएको छ । ढलको ढक्कन फुटेर बेहाल छ । अनि, सबैभन्दा भद्रगोल कहाँ छ भने रोड डिभाइडर राखेर एकतर्फी बनाएको सडकमा बटुवालाई जहाँबाट पनि बाटो काट्न रोकतोक छैन । पुलचोक, सहिदचोकमा जेब्राक्रस नभएको होइन । तर, यो जेब्राक्रसमा पैदलयात्री कमै पुग्छन् । आफूलाई मन लागेको ठाउँबाट दायाँ, बायाँ नहेरी फुर्रर कुद्नेहरु भेटिन्छन् । पूर्वाधार उच्चस्तरको भएर के गर्नु, हाम्रो चिन्तन माथि उठ्न सकेन ।
सडक क्षेत्रमा अहिले चर्चित अवस्थालाई पनि उल्लेख गर्न आवश्यक भएको छ । पुल्चोकदेखि तल गएको एउटा शाखा रोड छ, जसलाई चितवनवासी न्यूरोड भनेर चिन्छन् । विसं २०५६ सालतिर यो न्यूरोड थियो । यो भव्य थियो र यसको शान नै बेग्लै थियो । त्यो बेलाको अवस्था हेर्दा मान्छेले यसलाई न्यूरोड भन्न छाडेनन् । तर, अहिले हेर्दा यो सडकमा पीच भेटाउन मुस्किल छ । धूलो उडेर बेहाल छ, तैपनि यो सदाबहार ‘न्यूरोड’ । रोड बन्नुअघि निर्जन रहेको न्यूरोड क्षेत्रमा आवासीय पूर्वाधारहरु धमाधम बने । बाटो फराकिलो भएपछि साना–ठूला, भारी–हल्का सबै गाडीहरु बेरोकतोक कुदे । अनि, न्यूरोडको नाममात्रैले थेग्न सक्ने केही थिएन । एक त, निर्माण उच्च तहको कहिल्यै हुन्न हाम्रो नेपालमा । धेरै नै ख्याल राखेमा पनि मध्यम तहको निर्माण भएको हुन्छ । त्यो मध्यमस्तरको सडकमा हामी महाभारीका गाडीलाई कुद्न छूट दिन्छौँ । अनि, न्यूरोडको हालत नौ दिन वा नौ महिनासम्म ठीकठाक हो, त्यसपछि छिद्र पर्न सुरू हुन्छ । छिद्र बढेर खाडल हुन्छ ।
न्यूरोडको प्रसंग किन उल्लेख गर्न आवश्यक थियो भने हामीले पूर्वाधारहरुको उपयोगका सम्बन्धमा सावधानी अपनाएनौँ भने ती बनेका पूर्वाधारहरु टिकाउ हुँदैनन् । अनि, पूर्वाधारहरु ज्यान लिने माध्यम पनि हुन थाल्छन् । अहिले लायन्सचोकदेखि चितवन मेडिकल कलेजसम्म जुन तहले सडक विस्तार गरिँदै छ, त्यसमा व्यवस्थापनका विषयमा यी पक्षहरुलाई ख्याल गर्न आवश्यक छ । यो सडकखण्ड निकै फराकिलो बन्दै छ । सडक फराकिलो हुनुको अर्थ के हो भने ठूला गाडीहरुले अब यही बाटो रोज्नेछन् । गाडीको ओहोरदोहोर बढेसँगै फुटपाथ पसल पनि झुल्कने छन् । मान्छेको ओेहोरदोहोर त हुने नै भयो । यो क्षेत्र आफैँमा मान्छे धेरै ओहोरदोहोर हुने क्षेत्र पनि हो । जनसरोकारको कार्यालय भरतपुर उपमहानगर–पालिका पनि यहीँ नै छ । अस्पतालदेखि ठूला–साना होटल र बैंक, वित्तीय संस्थाहरु यही क्षेत्रमा छन् । सडक निर्माणसँगै यी पक्षसँग जोडिएर आउने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने योजना हामीसँग छ वा छैन ? त्यो मुख्य कुरा हो । सडक विस्तारले खुसी हुनुभन्दा पनि व्यवस्थापनको कार्यक्रम छ वा छैन, चासो त्यता दिनु परेको छ । किनभने, हामी निर्माणसँगै व्यवस्थापन र संरक्षणका योेजना ल्याउँदैनौँ ।
तर, भरतपुर ओरालोको बाटोको सन्दर्भमा त्यो ख्याल राखिएन भने यसले दुर्घटनालाई बढवा दिनेछ । किनकि, हामीमा सडक अनुशासन पटक्कै छैन । यात्रु ओराल्न वा चढाउन साना म्याजिक गाडीदेखि लिएर बस, मिनीबस झ्यापझ्याप जहाँ पनि रोक्ने गरेको देखिन्छ, यो खण्डमा । उकालो—ओरालो बाटोमा यस्तो गर्दा निकै जोखिम हुनेछ । सडक फराकिलो भएसँगै बढ्ने भीडमा पनि यही तौरतरिका कायम राख्ने हो भने त्यसले घातक अवस्था निम्त्याउने छ । त्यसमाथि, पैदलयात्रु बेपर्वाह छन् । उनीहरुलाई बाटो काट्नुसँग मात्रै मतलब छ । गाडीको अत्यधिक चाप हुने राजमार्ग क्षेत्रमा छौँ भन्ने कुराको उनीहरुलाई वास्ता नै हुँदैन ।
त्यो सो त यो क्षेत्रमा अस्पतालहरु पनि रहेका हुनाले धेरै जना हतारो मानसिकतामा रहेका हुन्छन् । मनमा तनाव र हातमा कागजपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने कार्यालयहरु पनि यतै छन् । त्यसैले, यो अवस्था ख्याल राख्न अति आवश्यक भएको हो । त्यसैले, फराकिलो हुँदै गरेको लायन्सचोक चितवन मेडिकल कलेज सडकखण्डमा व्यवस्थापन पक्ष निकै जरूरी छ । यसका लागि के–के गर्ने हो, सम्बन्धित निकायले बेलैमा अग्रसर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो सडकखण्डमा अहिले गाडी र पैदलयात्रुको चाप अत्यधिक छ, सडक फराकिलो भएपछि त्यो झन् बढेर जाने निश्चित छ ।
यो सडक क्षेत्रमा फुटपाथ व्यवस्थापन हुनुपर्ने छ । बनेको फुटपाथमा पसलेहरु बस्न नपाउन ध्यान दिन आवश्यक छ । अनि, सबैभन्दा मह¤वपूर्ण कुरा, यो बाटो एकतर्फी मात्रै हुनुपर्ने छ । ठीक बीचमा पक्की डिभाइडर राख्नुपर्ने हुन्छ । अनि, साना–ठूला कुनै पनि गाडीलाई जहाँ पायो त्यहीँ रोकेर यात्रु चढाउन र ओराल्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ । डिभाइडर अग्लो हुनुपर्छ । पैदल हिँड्नेहरुले पनि जहाँबाट पायो त्यहीँबाट बाटो काट्न नसक्ने गराउनुपर्छ । लायन्सचोकदेखि वीरेन्द्र क्याम्पसबीचमा कतै ओभरहेड ब्रिज राखेर पैदलयात्रु ओहोरदोहोर गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । ठूला भारवाहन गाडीहरु बढी चाप हुने समयमा ओहोरदोहोर गर्न नपाउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ ।
यसो गरेमा निर्माणसँगै त्यसले पार्ने समस्याहरुलाई निराकरण गर्न मद्दत पुग्ने छ । पूर्वाधारले जीवन सरल र सहज बनाउने हो, तर बनेका पूर्वाधारको उचित उपयोग र व्यवस्थापन भएमा मात्रै यो उद्देश्य हासिल हुने हो । सडक चौडा बनाएरमात्रै छाड्ने योजना त सम्बन्धित निकायको पक्कै छैन होला । तर, केही सूक्ष्म व्यवस्थापनका विषयमा पनि सोच्न आवश्यक देखिएको हो । यसतर्फ ध्यान गएको भए राम्रो भयो, नभए बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणसँगै त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा चुक्ने गरेका उदाहरण हाम्रासामु भएकाले के हुँदै छ र कसो हुँदै छ भनेर सर्वसाधारणले पनि चासो राख्न आवश्यक छ ।
बन्न त न्यूरोड पनि भव्य नै बनेको हो । तर, चमकदमक टिक्न गाह्रो भयो किनकि त्यो सडकको संरक्षणका बारेमा हामीले बेलैमा सोच्न सकेनौँ । फराकिलो त पुल्चोक–लायन्सचोक खण्ड पनि
छ । तर, बेथिति हामीले रोक्न सकेनौँ र व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । यही हालत लायन्सचोकदेखि माथिको सडकको हकमा पनि नहोस् । त्यो सडक त अझ जोखिम क्षेत्रमा छ, जहाँ हुने सानो लापरबाही र बेवास्ताले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने खतरा रहेको हुन्छ । त्यसैले, बाटो फराकिलो हुने भयो भनेर मख्खमात्रै परेर नबसौँ । यसको व्यवस्थापन र संरक्षणका ठोस योजना पनि बनाउन थालौँ । बन्ने हो वा होइन, पत्ता लगाएर नबन्ने हो भने बनाउन तत्काल दबाब दिन थालौँ ।